फिल्म हिट भएर पनि अभिनेता रणदीपको चर्चा हुन नसकेका यी फिल्म « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता रणदीप हुड्डाको जन्म २० अगष्ट १०७६ मा हरियाणाको रोहतकमा भएको थियो । थिएटरमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका रणदीप हुड्डा घोडासवारीको खुब शौखिन छन् । कक्षा आठमा पढ्दै गर्दा उनी घोडा सवारी गर्ने क्रममा लडेर घाइते भएका थिए । त्यसपछि उनले केही वर्षका लागि घोडासवारी (हर्षराइडिङ) गरेनन् ।
अभिनेता रणदी हुड्डाले आफ्नो करियरमा कयौं सुपरहिट फिल्महरु गरे । फरक–फरक गेटअपमा देखिएका रणदीपका कयौं फिल्महरु बक्स अफिसमा हिट भएका छन् । रणदीपका केही यस्ता फिल्महरु छन्, जहाँ रणदीपको चर्चा नभई फिल्मकी अभिनेत्रीको चर्चा खुब गरियो ।
१. रंगरसिया– २०१४
–यो फिल्ममा अभिनेता रणदीप हुड्डाले १९ औं दशकको चित्रकार राजा कवि वर्माको भूमिका निभाएका थिए । फिल्ममा उनले कुशल भूमिका निभाएका थिए, तर पनि उनले चर्चा पाउन सकेनन् । फिल्ममा रणदीपको भन्दा पनि नंदना सेनको चर्चा खुब भयो । नंदना सेनले फिल्ममा इन्टिमेट सिन दिएकी थिएकी थिइन् ।
२. हाइवे– २०१४
–इम्तियाज अलीको निर्देशनमा बनेको यस फिल्ममा आलिया भट्ट मुख्य अभिनेत्रीको भूमिकामा थिइन् । उनको चर्चा हुनु जायज पनि थियो, किनभने फिल्म आलियामै केन्द्रित थियो । फिल्ममा आलियाको अभिनयलाई खुब रुचाइयो । महावीर भाटी गुज्जरको भूमिकामा देखिएका रणदीपलाई नोटिश गरिएता पनि उनको खासै चर्चा हुन सकेन ।
३. साहेब बीवी और गैंग्सटर–२०११
–तिग्मांशु धुलियाले निर्देशन गरेको यस फिल्ममा रणदीप हुड्डाको भूमिका दमदार थियो । उनी एक गुस्सैल ब्यक्तिको भूमिकामा देखिएका थिए । उनले आफ्नो भूमिकालाई कुशलता पूर्वक निभाएका थिए । तरपनि फिल्ममा उनको चर्चा खासै भएन । बरु माही गिल र जिम्मी शरगिलको चर्चा धेरै भयो ।
४. सरबजीत –२०१५
सरबजीतको जीवन र संघर्षमा बनेको यो फिल्ममा रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिकामा थिए । यो फिल्मको लागि रणदीपले जबरजस्ती ट्रान्सफर्मेशन समेत गरेका थिए । फिल्ममा ऐश्वर्य राय बच्चनले सरबजीतको बहिनीको भूमिकामा देखिएकी थिइन् । त्यसोत पूरै फिल्ममा रणदीपको नभई अभिनेत्री ऐश्वर्यको भूमिकाको चर्चा धेरै भयो ।
‘मुटु उपहार’ पञ्चैबाजा गीतले बजार पिट्दै (भिडियो)
कार ट्रकसँग ठोक्किदा बलिउड अभिनेत्री शबाना गम्भीर घाइते
गायक तथा अभिनेता यमन माझी सम्मानित
दीपकले आस्थालाई दिए यस्ताे सुझाव
अक्षय कुमारको ‘गुड न्यूज’ले चाँडै २०० करोड क्लबमा इन्ट्री गर्दै !